Ngesikhathi iGeneva Motor Show ka-2012, Chevrolet yabonisa ukumaketha isu nezimo. sedan zaziwa kahle kakhulu futhi hatchback uzokwenza inkampani "isici sesithathu" - "Chevrolet Cruze" nqola. Tihlatiywa tiya ocacile: lezipho ezintsha - a-umnyango ezinhlanu, isihlalo emihlanu "Rookie" uye abangela isiyaluyalu emakethe auto.
Udvweba olulodwa stylish imoto entsha evela ezimise U-sokunciphisa umoya lapho zindiza cowl wokushaya, ezimbili-level mbumbulu Izinsimbi futhi olusha "photogenic" bumper nge inkungu stylish phambi obunobunye "ezidla" nge stylish, svetooptika emnandi. By the way, imodeli odlule uye wafakazela brand ekukhuleni kahle Chevrolet, wathandwa trust phezu 1.3 million. Abanikazi. Okuthuthukile "Chevrolet Cruze" enemisebenzi 2013 has a sethubeni elihle intuthuko eyengeziwe.
Ngokwesibonelo, abathengi unesithakazelo onga ezintsha futhi izinjini ezinamandla (iluphi okuzoxoxwa ngalo ngezansi). Bayakwazisa ingaphakathi evulekile enemisebenzi umthwalo gumbi amalitha 500. Umqulu umphumela cargo ngesikhathi izihlalo ezingemuva eligoqiwe - 1478 amalitha. - sushestvenno bakwazi ukusiza nge-isikhathi esisodwa traffic jikelele. Usayizi umxhwele imoto azikhulumele: 4655 mm, 1797 mm, 1521 mm (ubude, ububanzi, ukuphakama). Nokho, kuvamile ukuba izikhali legkovik esikhulu waphenduka ezemidlalo obunobunye. phansi kwalo imvume - 155 mm. Imodeli entsha uwina ingaphandle, usebenzisa "cool" amathayi shestnadtsati- futhi-nesikhombisa intshi.
Umugqa uphethiloli injini nge displacement 1.4 (140 hp) kanye 1.7 (130 hp) uhambelana ngokweqile isivinini imoto uhlamvu i "Chevrolet Cruz" nqola. Izibuyekezo uqaphele nokuncipha amandla motor wesibili kube kwandziswa ivolumu isilinda ngenxa efakwe uhlelo fuel Umnotho "ukuqala-stop" ukuthi ikhubaza injini at lutho. Ngesikhathi esifanayo phezu track safinyelela irekhodi ongaphakeme petrol - 4.5 amalitha 100 ikhilomitha ngalinye! izici Dynamic we 1.4l injini ukuvumela esheshisa 100 km / h ngoba 9.5 imizuzwana futhi ingafinyelela isivinini phezulu - 200 km / h. Ukuze ukonga 1.7 litre isivinini injini 100 km / hr ngoba 10.4 uyithayiphe nge, ngesikhathi esifanayo. Isivinini Maximum - 191 km / h. Ngo ulayini "Chevrolet Cruz" diesel izinjini futhi inikeza Lokufuduka 1.7 no 2.0. Basuke zihlukaniswa design ngempumelelo, ngoba bangalahlekelwa uphethiloli: ijubane diesel okufana esiteshini enqoleni - okufanayo 200 km / h! Ukuze diesel izinjini futhi inikeza uhlelo "ukuqala-stop". Lapho ibizwa abayifisayo besebenzisa lezo imishini nge othomathikhi-6 (Cruze 1.8). Izinketho ne yokudlulisela manual transmission ibhukwana, 5-6 futhi isici imoto "Chevrolet Cruze" nqola. Izibuyekezo uqaphele high ukumiswa. Front - McPherson, futhi bakhulise - entwasahlobo, lulwimi engaphansi, inikeza olubushelelezi kakhulu futhi manageability.
Abashayeli kumasayithi ezikhethekile abonisa ride ukhululekile, ukusheshisa 'soft', "mnandi" ngokushintsha amagiya, kokukhuluma bokwenza: ukubambezeleka automatic transmission ehlome wasixosha igesi kanye okusezingeni eliphezulu igesi mileage edolobheni (13 amalitha 100 ikhilomitha ngalinye). izici engeziwe umshayeli kuyinto amasondo ayo multi-function, ukukhwezwa ngaye futhi abagibeli esihlalweni evuthayo, "emaphaketheni" ukhululekile lemiphethweni umnyango imoto "Chevrolet Cruze" nqola. Izibuyekezo ukuncoma informativeness kudeshibhodi nge computer ugibelile. Amajaji kungase futhi zifaka phakathi "cool" uhlelo ukuzijabulisa alalelwayo-video-ngocingo MyLink. Ukusebenza okwengeziwe kukhona USB-isixhumi.
Chevrolet Abaklami kahle nekuchazwa zokuphepha, njengoba kufakazelwa ukubuyekezwa. "Chevrolet Cruze" inqola "oshayelayo", ngenxa exchange rate ohlelo ukunciphisa kungenzeka ohlangothini skids. Kukhona ama-airbag ayisithupha. Abamba braking System inikeza okusheshayo unyathela amabhuleki kahle.
Imoto, njengoba kushiwo, yakhelwe ekunyusweni ngempumelelo emakethe European.
Yemvelo Cosmetics - white amaqanda for isikhumba oily